Magacaabista Golaha Wasiirada Puntland oo heer gabagabo ah – Radio Daljir
Magacaabista Golaha Wasiirada Puntland oo heer gabagabo ah
Febraayo 9, 2019 5:39 b 0
Madaxwaynaha dowladda Puntland iyo kuxigeenkiisa ayaa waxaa gabagabo u maraya mudadii loogu kordhiyay inay kusoo dhisaan golaha wasiirada ee Puntland oo ah kii waqtiga ugu dheeraa qaata ee dowladda Puntland.
Wararka laga helayo madaxtooyada Puntland ayaa sheegaya in ay suurtagal tahay maanta ilaa iyo beri in lagu dhawaaqo golaha wasiirada ee Puntland.
Shacabka oo aad u dhowr sugaya ayaa dalbanaya golahan inay aad uga dhexmuuqdaan wasiirada daljoogta ah, oo ay ka duwanaato xukuumadihii hore Puntland oo lagu dhaliili jiray dad aan xog ogaal u ahayn dalka iyo dadka in loo magacaabo xilalka wasaaradaha, kuwaasi oo xiliga laga qaado dib ugu laabta dalalka ay ka yimaadeen.
Madaxwaynaha dowladda Puntland Siciid Cabdulaahi Deni iyo kuxigeenkiisa Axmed Karaash ayaa leh wadatashiyadii ugu dambeeyey ee golihiisa xukuumadda uu kusoo dhisayo.
66ka xubnooda ee golaha wakiilada Puntland ayaa la horgayn doonaan ku dhawaaqista kadib si’ ay usoo ansixiyaan.
Siyaasi Cali maxamed Geedi oo ka hadlay shirkii london (Daawo)